Zvigadzirwa Vagadziri uye Suppliers - China Zvigadzirwa Factory
EEC L7e Magetsi Pickup Rori-Pony
Yunlong's yemagetsi pickup rori ine EEC L7e mvumo yakanyatsogadzirirwa kune ese maapplication uko kuvimbika, mhando yekugadzira uye dhizaini inoshanda iri pamberi.Iyi mota yemagetsi yekushandisa ndiyo mhedzisiro yemakore echiitiko uye bvunzo pandima iyi.
Positioning:Zvekutengesa zvinhu, zvifambiso zvenharaunda uye zvireru zvekutakura zvinhu pamwe neyekupedzisira mamaira kutumira.
Mitemo yekubhadhara:T/T kana L/C
Packing & Loading:4 Zvikamu zve 1 * 40HQ.
Yunlong EEC L2e electric tricycle-J3 is an all-electric tricycle inogona kutakura vanhu 2-3, inonyatso kuzadzisa zvinodiwa nemhuri kuti ibude.Iine chitarisiko chakanaka, kushanda kwakanaka uye kuchengetedzwa kwepamusoro.Inogona kufamba makiromita 70-80 pamutengo mumwe chete, uye iyo yakanyanya kumhanya i35km/h.
Positioning:Inotaridzika kunge mini-mota asi inoratidzira yepamusoro-giredhi, yakachengeteka, uye air-conditioned kabhini, iyo yakasarudzika chikuva inobvumira iyi mota kutyaira kudzivirira traffic uye matambudziko ekupaka.
Packing & Loading:4 Zvikamu zve1 * 20GP;10 Zvikamu zve 1 * 40HQ.
EEC L6e Magetsi Kabhini Mota-J4
EEC L6e Magetsi Kabhini Mota-J4 imhando nyowani yakagadzirwa uye inogadzirwa neYunlong Company.Yakanyatsokodzera kuti vakwegura vafambe.Yakachengeteka uye yakasununguka, ine ruzivo rwekutyaira yakanaka, haina kusvibiswa, uye inogona kushandiswa mumugwagwa pasina rezinesi rekutyaira, iyo iri nyore pakufamba.
Positioning:Kwekutyaira chinhambwe chipfupi uye kufamba kwemazuva ese, inokupa iwe inochinjika yekufambisa sarudzo inogona kufamba-famba, inoita kuti hupenyu hwako hwemazuva ese huve nyore.
Positioning: Knight yemagetsi mudhudhudhu inhanho inotevera mukushanduka kwemudhudhudhu.Kumhanyisa kunoshamisa pane chero RPM, mitsetse inopinza uye ergonomics yemitambo inoshandura kukwira kwako kwezuva nezuva kuita kunonakidza.
Kwekufamba kwemazuva ese, kutyaira chinhambwe chipfupi.Ipa kutyaira nekukurumidza uye nehasha, kutyaira kune zvimwe.
Hupenyu hwedu hahufanire kunamira mubishi remumugwagwa.Rega uzorore.
Positioning: Ipa yakasvibira uye eco nzira yekutenderera.Eco ride yekufamba kwemazuva ese, kutyaira chinhambwe chipfupi, kutora nzendo kuenda kuzvitoro zvemuno nemasevhisi, akanakira kutenderera dhorobha.
Positioning:Kwekutyaira daro pfupi uye kufamba kwemazuva ese.Inokupa iwe inochinjika yekufambisa sarudzo inogona kufamba-famba, inoita kuti hupenyu hwako hwezuva nezuva huve nyore.
Positioning: Yakanaka mhinduro yezvishandiso uye Eco-inoshamwaridzika mitoro kugovera & yekufambisa.Yekupedzisira mamaira kutumira uye Logistics mhinduro.
Positioning: Yakanaka mhinduro yekuunza chikafu uye inotonhora cheni Logistics & yekufambisa mumaguta, compact kufamba nyore pakati peguta.
Positioning:Yekutyaira chinhambwe chipfupi uye zuva nezuva kuenda.Inokupa iwe inochinjika yekufambisa sarudzo inogona kufamba-famba, inoita kuti hupenyu hwako hwemazuva ese huve nyore.